Speed is ego. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ ma a bịa n’ozi e-commerce. Ọ bụghị naanị ndị na-azụ ahịa na-ahapụ saịtị gị mgbe ọ naghị eme nke ọma na desktọọpụ ma ọ bụ ekwentị. Ebe ntanetị na ibe ọsọ ọsọ na-emetụta nchọta ọchụchọ yana. Nchọgharị ọchụchọ achọghị ka ndị ọrụ nwee nkụda mmụọ mgbe ha gara na saịtị nwayọ nwayọ, yabụ enweghị uru ọ bụla n'iji ha rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-adị n'elu ikpo okwu, n'onwe ya. Mkpokọta onyonyo, caching, na ntanetị nnyefe ọdịnaya nwekwara ike imetụta saịtị gị na ọsọ ọsọ - ịghara ịkọwapụta atụmatụ nke isiokwu gị ma ọ bụ ndebiri. Ebumnuche emezighi nke ọma na ikpo okwu dị egwu ga-ebute nsogbu. Na njikarịcha ọsọ na oke ngwaike na nwayọ nwayọ nwere ike karịa ndị asọmpi gị.
Selfstartr weputara nsonaazụ nke isi-isi na-atụnyere saịtị ecommerce iji gosipụta arụmọrụ nke ọ bụla, akpọrọ Egwuregwu Ecommerce gị ọ na-ahapụ ego na tebụl? Kedu nyiwe si pụta n'elu? Nwere ike ịga na nke ha ederede na nbudata nyocha zuru ezu. Echere m na ha arụ ọrụ zuru oke.
Tags: 3d ụgbọ ibuabaannukwu cartelBigCommerceUgbokporo 66isindinaecommerce n'elu ikpo okwuarụmọrụ ecommerce n'elu ikpo okwuebe ikpo okwuihe ederedeNgwaọrụ ecommerce kachasị ọsọna-ekpo ọkụjigoshoplemon guzoromagentoemeghe ụgbọpinnacle ụgbọPrestaShopradwareonyekachiụlọ ahịasparkpayEgwuregwu squarespacennukwu ihevollujiwoo azụmahịawoocommercewp ahịax-ụgbọ ibu